Maalgeliyeyaasha & iskaashatada
Warbixin luqado kala duwan ah
Khidmada akhriska - Talande Webb
Inta baa waxa ka heleysaa warbixin ku saabsan bogga www.informationsverige.se. Adiga inta baa waxa ka heleysa warbixino oo ku anfaceyso iyo sidaa bogga u isticmaalikartid. Boggan waxa lagu soo kordhindoona markasto iyo waxaa loo yeeldoona dhowr qalab oo cusub oo adiga aad adeegsan kartid.
Warbixin ku saabsan Iswidhan – bogg oo quseeyo bulshada wadanka ku cusub
Hadii aad su'aalo ka qabtid sida Iswiidhan nidaamkeeda yahay ama sidaa magangelyo loo codsado waa inaa su'aalahaas weeydiisa hay'adda mas'uulka ka ah su'aalooyinkaas. Bogga informationsverige.se kama sii shaqeynkaro ee-meylada loo soo diro hadii eysan ku qorneen luqada iswiidhishka ama ingiriska.
Qeybta Mushtamaca waxa ka heleysaa warbixin af iswiidhish fudud ku qoran oo ku saabsan Barashada bulshada. Buuggaas waxaa ka soo koobbiyeen karta internetka asagoo ah dukementiga pdf. Sidaas waa ku suubinkarta dhammaan buuggas oo dhan Barashada bulshada – "Ku saabsan Iswiidhan". Waa soo koobbiyenkarta xitaa hadii aad rabto dhowr cutubo kaliya.
Sidee baa suubin markaa isticmaalaayo booggan?
Sidaa aragti ballaaran uga helikartid warbixinta ku qoran boggaan marba waxaa tuujisaa qeybaha kala duwan midkood, oo waxaa sii akhrisataa warbixinada oo booggaas ku qoran. Qeybaha waxey kala yihiin Degnaansho iyo noolansho, Shaqo iyo waxbarasho, Daryeel iyo caafimaad, Carruurta iyo waalidka, Mushtamaca iyo ugu dambeyn Baro iswiidhish. Haddii aad rabtid inaa warbixin kale ka sii heshid qeybahaas midkood waxa toos u tuujisaa oo u gashaa qeybtaas, oo soo fiiri hadii aad ka heshid waxaa aad raadineysay.
Adiga waxaa tuujisaa isku xiriiriyaasha oo markaas xiiseyneysid. Markaas baa waxa dhicikaro inaa boog kale u sii gudubtid, tusaale ahaan Hay'adda socdaalka ama ogeysiinta daryeelka isbitaalada. Hadii oo booggas uusan laheed luqada aad booggan dalbatay boogagaas waxa ku heli luqada iswiidhishka. Dhammaan isku xiriiriyaasha marka tilmaamaha gacanta ku haysid kore dhigtid waxa soo baxaayo qoral.
Sidaa luqada rabtid u dalbatid waxa tuujisaa sanduuqa oo kore midigta kaa jiro (kore oo bidixda bey noqon hadii aad dalbatay luqada carabiga) iyo markaas dalbo hal luqad. Sidee baa u badalaa luqada.
Adiga hadii aad rabtid xitaa waxaa isticmaalikarta qeybta raadinta, hadii aad raadineyso warbixin ama erey ku qoran booggan.
Warbixin ku saabsan sida nidaamka Iswiidhan yahay iyo barnaamishka akhrinta qoraalada boogaga internetka. Barnaamishka akhrinta qoraalada boogaga internetka[Talande Web] lagu ma helo dhammaan luqadaha oo dhan, iyo adiga waa inaa soo koobiyeysataa barnaamish qaas ah sidaa u isticmaalikartid barnaamishka akhrinta qoraalada boogaga internetka. Hadii aad rabtid waxa tuujisaa isku xiriiriyahaan oo ka heleysid boogga bilaawga.
Warbixinada aan helikaro maxaa kamid ah?
Meeshaan waxa ka heleysaa warbixino la isku soo arooriyay oo ku saabsan mushtamaca iswiidhan iyo nidaamka ey ku dhisan tahay. Adiga waxa meeshan ka akhrisankarta warbixin ku saabsan sida wadanka Iswiidhan loo maamulo iyo sidaa adiga uga qeyb-qaadankartid oo fikrado ugu darsankartid, adiga waxa heli warbixin ku saabsan nidaamka kaalmada bulshada iswiidhan siduu u dhisanyahay markey noqoto kaalmeenta dhaqaalo ahaan iyo markey noqoto daryeelka caafimaadka iyo isbitaalada. Waxa heli tilmaam oo tilaabo tilaabo oo laga soo bilaabo Magangelyo ilaa shaqo iyo qaamuus ereyo. Qeybkasto waxa kas ii hose heli warbixino kale. Boggan waxa xitaa ka heli qalab quseeyo dadka ka qeyb-qaateen Barashada bulshada – Ku saabsan Iswiidhan.
Meeshan waxa ka heleysaa isku xiriiriyaal oo kuu sii kudbinaayaan bogag kale oo boggan kamid ah iyo kuwa aan kamid eheen. Bogga bilaawga waxa ka heleysaa isku xiriiriyaal aan u maleyneeyo in ey ku anfacaayaan adiga oo ku cusub Iswiidhan.
Waxa xitaa jiro isku xiriiriye oo adiga kuu sii kudbinaayo bogg kale oo warbixin kaa siinaayo kuwa na maalgaliyay iyo kuwa aan la wada shaqeyno.
Degnaansho & noolansho
Qeybtaan waxa ka heleysaa warbixin ku saabsan bulshada Iswiidhan ku nool iyo noocyada kala duwan oo guryaha la dago, iyo xitaa xeerarka anaga dhammaan aan ku qasbanahay inaa raacno. Waxey ahaan karan xeerarka ku saabsan guri raadinta ama xeerarka wax isla wadaagida, xeerarka ku saabsan hadii guriga nooga bax lagu dhaho, iyo xitaa sidaa ku ogeysiin kartid hadii aad rabtid inaa guriga badalatid.
Waxa jiro dhowr bogg oo ku saabsan dhaqanka iyo xilliyada firaaqada Iswiidhan, iyo isku xiriiriyaal kuu sii gudbinaayo ururo kale.
Qeybtaan waxa ka heleysaa warbixin ku saabsan sidaa adiga shaqo u raadsankartid ama shirkad ku furankartiin. Adiga meeshaan waxa ka akhrisan karta fursadaha ku saabsan waxbarashooyinka jiro iyo sida adiga aqoonta shaqada aad wadankaadi kala imaatay laguugu qiimeyn karto. Adiga waxa warbixin ka helikarta barashada luqada iswiidhiishka iyo sharciyada oo lagu dhaqmo suuqa shaqada oo iswiidhan.
Markaa tuujisid qeybta ey ku qorantahay Daryeel iyo caafimaad waxaa ka akhrisan karta warbixin ku saabsan nidaamka ceymiska jirooyinka iyo sida uu yahay nidaamka dhowrida caafimaadka, daryeelka isbitaalada iyo daryeelka ilkaha. Meeshaan waxa xita ka heleysa bogga isku xiriiriyaal oo quseeyo daryeelada laga helo meesha aad ku nooshahay. Adiga waxa u sii gudbi bogga warbixinada daryeelka iyo isbitaalada oo gobolkaada mas'uulka ka yahay. Meeshas waxa ka heleysa warbixin ku saabsan daryeelka oo degmadaada.
Ilmaha & dhallinyarada
Qeybtaan waxa ka heleysa warbixin ku saabsan xaqa carruurta, sida uu u shaqeeyo nidaamka dugsiyada iswiidhan, iyo xitaa ugu horeyntii warbixin khuseysa adiga ah ilmha qaxootiga oo keligood yimid iswiidhan.
Meeshan waxa ka heleysa isku xiriiriyaha oo BRIS (Carruurta xaqa ey ku lee yihiin mushtamaca) oo carruurta iyo waalidka ka helikaran caawinaad iyo qof ey la hadlaan.
Meeshan waxa ka akhrisan karta sida uu yahay nidaamka mushtamaca Iswiidhan. Qeybta Barashada bulshada baa waxa ka heleysa warbixin quseeyso adiga oo ka qeyb-qaadanaayo Barashada bulshada. Adiga hadii aad rabtid si toos ah waxa ka akhrisan karta booggan ama soo koobbiyeen karta dhammaan buuggas kaas oo ah dukumentiga pdf. Hadii aad rabtid dhowr cutub oo xiiseyneysida baa soo koobbiyeesen karta.
Ku adag tahay sancadka!
Adiga oo isticmaalin kombiyuutar iyo internetka weey ku adkaan kartaa inaa heshid waxaa raadineysid markasto. Waxaa jiro boggag kale oo adiga tababar kaa siinaayo adiga aqoontada sida loo isticmaalo internetka iyo kombiyuutarka. Hal tusaale oo wanagsan waxaa waaye e-muwaadin.